Daryeelidda jidhka, wajiga iyo timaha ka hor arooska
Haddii kahor ficilka arooska ee barnaamij gaar ah, kuwaas oo takhasusle ah ayaa soo saaray, ka dibna waxaad ka fiirsan doontaa ka fiican mustaqbalka, joogtada ah iyo aroosyada hore. Barnaamijka waxaa loogu talagalay qaybaha da 'kala duwan, sidaa daraadeed mid kasta oo ka mid ah jinsiga caddaalad ah wuxuu helayaa talooyin ku saabsan daryeelka timaha, jirka iyo wajiga ka hor arooska. Waa muhiim inaad xusuusatid in wax kasta oo aadan beddeli doonin, kaliya ma ahan inaad kaligaa dabagaliso, laakiin si aad u dareentid raaxo iyo sharaf aad naftaada u haysatid, si sax ah ayaad ugu yeedhaa boqoradda dabaaldega. Intaa waxaa dheer, waxaad arki doontaa weyn ma aha oo kaliya maalinta arooska, laakiin sidoo kale waqti dheer ka dib.
Haddii aan 20 sano jirno
10 bilood ka hor arooska, codso jimicsi.
Haddii aad 20 jir tahay ama in ka badan 20 sano, markaa dheef-shiid kiimikaadku wuxuu shaqeeyaa iyo haddii aad leedahay miisaan xad-dhaaf ah, markaa way fududahay in la xaliyo. Waxaa ugu wanaagsan in lumiyo miisaanka bilkasta 2 kg isla markaana sii wad ilaa aad gaarto hadafkaaga. Si loo gaaro natiijada la rabay, waxaad u baahan tahay inaad sameysid aerobics ilaa nus saac 4-5 jeer toddobaadkii. Si loo gaaro natiijada ugu fiican, waxaad u baahan tahay inaad beddesho shaqooyinkaaga. Iyo si loo kordhiyo saameynta, waxaad u baahan tahay inaad sameyso wax badan oo aad ku tababarto 3 jeer oo aan doono. Waxaa intaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro burka itoobiya, dufanka iyo la shiilay. Waxaa fiican inaad ku tiirsato midhaha, kalluunka iyo khudaarta. Peine wuxuu ka yar yahay 2 litir oo biyo ah maalintii.
6 bilood ka hor arooska . Soo qaado qaabka ugu fiican ee diyaarka.
Inta badan marka ay dadku eegaan wajigaaga, waxay isla markiiba u jeediyaan fiirsashada suxulka. U tag takhtar takhasus ah oo go'aaminaya nooca hubka ah ee ku habboon, ka dibna isku day inaad socotid bishiiba si loo saxo. Booqashada ugu dambeysa ee mashiinka indhaha waa inuu ahaado maalinta arooska.
Waxaa jiray wakhti markii qof walwal waday uu wax cunay oo uu soo tuuray naqshad, laakiin hadda maaha mid la yaab leh. Da'daan da'daas, sunnadaada oo leh dabeecad aad u xiiso badan oo dabiici ah oo muuqaal ah.
3 bilood ka hor arooska . Toddobaad kasta, sameyso wax macquul ah.
Haddii aad si joogto ah u bixiso waqti sax ah ciddiyaha - ka ilaali iyaga, ka dibna ma burburin doonaan, kala go'i doonaan, iyo muuqaalkoodu wuxuu hagaajin doonaa marar badan. Waxaa intaa dheer, sidaa darteed ma aadin kartaa ciddiyahaaga arooska farxad. Faa'iido kale: waxaad awoodi kartaa inaad soo qaadato saddexdii biloodba si aad u qaadatid khyllak iyo qaabka aad jeceshahay oo u habboon. Haddii aad rabto inaad samayso nafta Faransiiska, ka dibna samee. Fikradda wanaagsan, kaliya talooyinka midabka midabkiisu ma ahan mid cad, laakiin adag. By habka, maanta aad sidoo kale u tagi kartaa master, si uu si quruxsan u habeeyay cidiyahaaga.
2 bilood ka hor arooska . Nadiifi maqaarka leh salicylic acid.
Haddii maqaarkaagu uu u nugul yahay finan iyo finan, ka dibna maalin kasta, ku dhaq biyo, taas oo marka hore waa inaad ku dartaa dhawr dhibcood oo salicylic acid iyo baaruud. Sidaas maqaarka bakteeriyadu way yar yahiin, iyo baruurta maqaarka ayaa hoos u dhigi doonta. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad xasuusnaato in maqaarka otasalicylic acid uu noqdo mid xasaasi ah, sidaas darteed waa inaad si joogto ah u dhejiso maskaxda mar walba mar walba isticmaashid qorraxda.
1 bilood. Ka ilaali timahaaga .
Mid kasta oo timo ayaa si weyn u eegaya timo caafimaad leh oo caafimaad leh, sidaas darteed u iibso shaambo shubo, mar kastana samee maaskaro si loo xoojiyo timaha.
Maalinta arooska . Ka fikir omakiyazhe.
Waxaa fiican inaad sameysid dabiici ah dabiici ah oo xoogga saara dhalinyaradaada iyo quruxda. Qaado saldhig yar oo dufan ah oo dufan ah iyo budo hufan. Waxay ku caawin doonaan.
Haddii aad tahay 30 jir
8 bilood ka hor arooska . Ka taxadar qashinka.
Habeenkii, ku darso kareemka ka soo horjeeda maqaarka leh fitamiin A wajigaaga, taasina waxay ka hortagaysaa daboolka ka soo baxaya qorraxda.
6 bilood ka hor arooska . Ka ilaali gacmahaaga.
Collagen ayaa horay loo soo saarin sidii 20 sano, sidaas darteed maqaarku wuxuu noqonayaa mid qalalan oo khafiif ah. Waa lagama maarmaan in la nadiifiyo oo gacmaha lagu ilaaliyo kiriimyada nafaqada leh vitamin E.
5 bilood ka hor arooska. Hel kareemka ka soo baxa dhibcaha.
Haddii aad leedahay da 'da da'o ama aad ka walwalsan tahay suuxinta hormoonka ama dhibaatooyinka midabka maqaarka, markaa waxaad u baahan tahay inaad isku daydo kiriimka sambabada. Waxay ubaahantahay in lagu dhajiyo lebbiska muddo 3 ilaa shanaad ah.
4 bilood ka hor arooska . Ka qaybgal tababarka awoodda.
Haddii aad u baahan tahay inaad lumiso miisaanka, ka dibna tababarka xoogga ah waa inuu noqdaa shaqo weyn. Tababarka Aerobobku ma siin doono natiijo sidan oo kale ah, sidaa daraadeed waxaa habboon in lakulo tababarka isbeddelka, wuxuu hagaajin doonaa muruqyada wadnaha iyo muruqyada podkachaet. Waxay ku boodi kartaa xadhig, jimicsi loogu talagalay triceps, oo ku ordaya isla markaana kor u qaadaya xarkaha. Tababbar kasta waxaa lagama maarmaan ah in lagu celiyo wareegga 3 jeer.
3 bilood ka hor arooska . Xoojinta timahaaga.
Marka heerkulka hormoonku isbeddelo, macnaheedu waa timuhu ma istaagi karaan, waxay noqon karaan kuwo qalalan oo aan niyadjab lahayn, gaar ahaan haddii aad si joogto ah u rinjirto.Ka hel hel ciladaha iyo maasarada khaas ah si aad u xoojiso timahaaga. Horeba timaheeda ayaa billaabi doonta. Haddii timuhu si fiican u socdaan, markaas wali waa daryeeshaa, sababtoo ah wakhtiga heerka estrogen ayaa hoos u dhacaya.
1 bil ka hor arooska . Waa lagama maarmaan in wax walba laga fikiro.
Iska ilaali xaaladaha walaaca. Qiyaastii 2-3 toddobaad ka hor dabbaaldegga, dalbashada maaskaro dhoobo wajiga. Sidaa daraadeed nadiifi indhaha oo wasakhda ah, oo ma jiri doonto finan. Hase yeeshee, waxay u muuqdeen, ka dibna isla markiiba iyaga saliid iyaga oo leh kareem u gaar ah oo aan lahayn booge peroxide. Sidaas awgeed maqaarkaagu wuu ka bogsanayaa.
Ha sameynin dhalaal dhalaalaya - wajiga waa inuu noqdaa mid cusub oo dhalinyaro ah. Isticmaal podvodkoy, oo indhaha geli. Under the cheekones nanesitemativy dhalanteed dabiiciga ah, iyo sidoo kale isticmaali stand stand qalalan leh irid-shadows of tones dhexdhexaad ah.
Haddii aad tahay 40 jir
8 bilood ka hor arooska . Retinolomesto dib u soo celiya maqaarka.
Fiidkii, saliidda maqaarka leh kareemka leh retinol, taas oo kaa caawin doonta in laga saaro laydhka sababa qorraxda.
6 bilood ka hor arooska .
Waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo kalamadaha ama yoga. Si aad u noqoto mid xoog leh, mid fudud oo ku habboon si loo sameeyo barnaamij isku dhafiya laylinta dabacsanaanta, aerobics iyo tababarka xoogga. Ahaanshaha jilicsanaanta ayaa gaar ahaan muhiim u ah da'daada, waxay faa'iido u leedahay kala-goysyada.
4 bilood ka hor arooska . U iibso kariimka habeenkii iyo kiriimka da'dooda.
Ka dib 40, maqaarka ku wareegsan indhaha ayaa noqda mid xasaasi ah, khafiif ah oo qalalan. Wixii maalin ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo leh content of hektar bjørk cad ayaa ku haboon. Kiriim habeen badh ah ayaa ka wanaagsan in la doorto badeeco leh ceramides, lentin iyo fiitamiin A iyo C.
3 bilood ka hor arooska . Fiiri bushimahaaga.
Maalin kasta 2 jeer qoortaada ku qoy.
2 bilood ka hor arooska . Ha u sheegin timahaaga maskaxeed.
Hadda waxaad ku raaxaysantahay sawirka caadiga ah, waxaad samayn kartaa fareemo, waxay qarin doontaa cilladahaaga, tusaale ahaan, laalaabkii wejiga ee wejiga, fiiri in timahaagu jilicsan yahay oo si fiican loo dhigo.
1 bil ka hor arooska . Ka fikir qurxinta.
Nestoit si ay u isticmaasho budada, waxa ugu wanaagsan in la helo aasaas ka mid ah kareemka tonan, waxa uu si fiican u qariyaa nacasta. Ka mid ah wareegyada indhaha hoosteeda.
2 toddobaad ka hor arooska . Naasnuujiyaha.
Isticmaal wax cad diiran wajiga si aad u adkeyso lakabyada sare ee maqaarka oo ka saar feeraha Haddii aad leedahay maqaarka engegan, ka dibna u hel kariimka habeenkii ah ee nafaqo leh.
1 toddobaad ka hor arooska . Daryeelka lugta.
Haddii aad ku jirto aroos ah dhar ama dhar ay lugaha la furay, ka dibna iftiimin maqaarka cagahaaga leh qurxinta marinnada badda ama aad ku kalsoon tahay dhajiyuhu.
Maalinta ka hor arooska . Abuuri iftiin iyo mug.
Ka dib markii ay timo dharbaaxo noqoto oo qafiif ah. Sidaa darteed, madaxaaga ku dhaq shaambo leh pantynol si aad timo timahaaga.
Maalinta arooska . Ka hor inta aadan codsan qurxin, nadiifi maqaarka.
Ka hor inta aadan codsan qurxin, isticmaal laba jeer oo kiriim ah nafaqo leh, fiiro gaar ah u qabo dhabannada iyo maqaarka indhaha hoostooda. Rinjiga muuqaalka wajiga ah ee tigno diirran. Isticmaal jilicsan, casaan-bunni ah ama midab malab ah oo dhab ah iyo indhaha. Tani waxay xoogga saari doontaa xariiqda qarniga. Dareeraha ka soo baxa ayaa si fiican u iftiiminaya caanno gaduud ah oo casaan ah ama isticmaalaya naas-nuujiyaha ugu jecel.
Xilliyada arooska ee woqooyiga
Sida dhab ahaan u guursato qof ajnabi ah
Xisbiyada tartanka bachelorette
Maalmaha ugu wanaagsan ee arooska ee 2010
Doorashada bouquet jiilaalka ee aroosadda - florist talooyin
Laba jeer ayaa ku soo biira wabiga guurka
Horumarinta hydrangeas guriga
Cajiibka caanka ah Nonna Grishaeva
Qaadashada si macquul ah
Oladushki on caano dhanaan
Noocyada suuxdinta qaybta qaliinka
Sidee jacaylka ku dhici kartaa nin? 5 sifooyinka dabeecadda ah ee la horumariyo
Sidee loo baraa ilmo aan ka cabsanayn dhakhtar?
Kaluunka hilibka lo'da ee Talyaaniga
Qaladaadka waalidnimada ee waalidnimada
Dabaaldegga Sanadka Cusub, sanadka Tiger Cadigi 2010
Keega muuska shaaha ah
Gabadha Spartak ee Mishulina ayaa ku dhawaaqday dhalaankeeda aabaheed: kiis cusub oo ku saabsan wiilkii sharci darrada ahaa ee jilaa
Cunto daaweynta daaweynta psoriasis
Pizza oo leh khudradda dabiiciga ah iyo saladh
Sida loo doorto meel loogu talagalay cunuga sariirta